Saturday .6June . 2020
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လိုအပ်နေတဲ့ အပူချိန်တိုင်းကိရိယာကို တီထွင်လိုက်တဲ့ မန္တလေးက စက်မှုလက်မှု ကျောင်းသား
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနီးပါ ကိုရိုနာဗိုင်ရပ်စ် ကူးစက်ပြန့်ပွားနေချိန်မို့ ကျောင်းတွေပိတ်ထားကာ အားလပ်တဲ့အချိန်မှာ အချိန်အခါအရ လိုအပ်နေတဲ့ အရာတစ်ခုကို စမ်းသပ်တီထွင်ခဲ့ရာမှ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မန္တလေးက GTI ကျောင်းသားများရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ အများအတွက် ကူညီလိုစိတ်ရှိမှု၊ လူငယ်လေးတွေဖြစ်ပေမယ့် အားလပ်တဲ့အချိန်မှာ အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချသွားခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်များကိုတော့ အများပြည်သူတွေ မလေးစားပဲ မနေနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ ကပ်ရောဂါကြောင့် အပူချိန်တိုင်းကိရိယာတွေစျေးကြီးလို့ဝယ်မရလို့ အခက်အခဲဖြစ်နေချိန် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအချိန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်ရပ်စ် ကူးစက်မှုကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အလွန်အရေးကြီးစွာ လိုအပ်နေသလို လူတစ်ဦးတစ်ယောက်တိုင်းမှာလည်း ကိုရိုနာဗိုင်ရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရမှု ရှိမရှိသိရှိနိုင်ဖို့ ကိုယ်ပူချိန်တိုင်း ကရိယာဟာလည်း နေရာဒေသတိုင်းမှာ လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ မန္တလေးက GTI ကျောင်းသားများရဲ့ စမ်းသပ်တီထွင်မှုကြောင့် လိုအပ်နေတဲ့ အပူချိန်တိုင်းကရိယာကို အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်တီထွင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း မတ်လ ၂၈ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ဒီကိုယ်အပူချိန်တိုင်းကိရိယာမှာ တပ်တဲ့ ဆင်ဆာနဲ့ မှန်ဘီလူးက ဝယ်ရတာ ရှားတယ် တရုတ်ကလည်း မဝင်တော့ဘူးလေ ဒါကိုသာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရင် အဆင်ပြေမယ် မန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ခေတ္တဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ကူညီဆောင်ရွက်ဖို့ ကြိုးစားသွားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်” လို့ တီထွင်သူ ဒုတိယနှစ်အီလက်ထရောနစ် အထူးပြုကျာင်းသားမောင်လမင်းသန့်က အခုလိုပြောပါတယ်။
အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကပ် ရောဂါဖြစ်ပွားနေချိန်မှာ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မန္တလေး)ကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကျောင်ပိတ်လို့ နယ်ပြန်မယ့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို ကျောင်းသားသမဂ္ဂက နှာခေါင်းစီးနဲ့ ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရာမှာ ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းစက်တွေက ဝယ်လို့ မရသလို ဝယ်လို့ရပြန်ရင်လည်း စျေးနှုန်းကြီးမြင့်နေတာကြောင့် စမ်းသပ်တီထွင်ကြမယ်လို့ ကတိပြုကြပြီး ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းစက်ကို တီထွင်နိုင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
“စိတ်ကူးတစ်ခုက ဖြစ်နိုင်ရင် ကမ႓ာကြီးကို ပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်လေလူငယ်ဆိုတာ စူးစမ်းချင်စိတ် ရှိတယ်လေ့လာချင်စိတ် ရှိတယ် ဒါကို မြေတောင် မြှောက်ပေးရမှာပါ ကျွန်တော်တို့က အားပေးတယ် အားလုံးလည်း လိုအပ်တာ မှာထားတယ် ဒါပေမယ့် အခက်အခဲဖြစ်နေတာက တရုတ်ကကို ဝယ်လို့ မရဖြစ်နေတာ ခက်တာက ဘယ်မှလည်း ဒီပစ္စည်းကဝယ်လို့မရဘူး သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ ကူညီပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီထက် အဆင့်မြင့်တာကိုလည်း လုပ်နိုင်သလို ထုတ်လုပ်မှုလည်း လုပ်လာနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်” လို့ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မန္တလေး)ကျောင်းအုပ်ကြီးဒေါက်တာ ကျော်ကျော်မြင့်ကပြောပါတယ်။
လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေချိန်မှာ ဝယ်လိုအား မြင့်တက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်ပူချိန်တိုင်းကရိယာတခုကို ကျပ်တစ်သိန်းကျော်အထိစျေးကွက်မှာ ရှိနေပါတယ်။
“အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မန္တလေး)အနေဖြင့် ယင်းသို့ စမ်းသပ်တည်ထွင်ထားသော ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းကိရိယာကို ကျွန်တော်တို့ ဦးစီးဌာနနဲ့ တိုင်းအစိုးရကသာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရင် တစ်ခုကို နှစ်သောင်းခွဲကျပ်နဲ့ သုံးသောင်းကျပ်လောက်ဆို ရောင်းနိုင်မှာပါ။ ဒါမှမဟုတ် အစိုးရကသာ ဒီကလေးတွေလှူမယ်ဆိုရင်တော့ လိုသလောက် ထုတ်လုပ်ပေးပါမယ်” ဟုအစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မန္တလေး)ကျောင်းသားများသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌ ကိုနိုင်မိုးဆန်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်တွင် အပူချိန်တိုင်းကိရိယာမှာ စျေးကွက်အတွင်း တစ်လုံးကို ငွေကျပ်တစ်သိန်းအထက်မှာ ရှိနေပါတယ်။
မန္တလေးရင်ခတ်သံ #AlinnMyay(အလင်းမြေ) #ပြည်သူ့ကူညီရေး #ပြည်သူ့အသံဖော်ဆောင်ရေး #သတင်းမှန်မီဒီယာ
လူ(၃)ဦးသေဆုံးခဲ့သည့် ဆင်မလိုက် ယာဉ်တိုက်မှု YBS-40 မှ ထွက်ပြေးတရားခံ ယာဉ်မောင်း ဖမ်းမိပြီ
ကိုရီးယားအပါအဝင် ၄ နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၃၃ ဦးကို အထူးလေယာဉ်ဖြင့် ပြန်ခေါ်
မုဒိတာအိမ်ရာဝင်းအတွင်း တရားမဝင်နိုင်ငံခြားသား ၇ ဦးဖမ်းမိ